स्कूलको फिस तिर्न डिर्टजेन्ट पाउडर बेच्ने गर्थे गुलशन ग्रोबर, फेरी कसरी बने बलिउडका ‘ब्याड म्यान’ ? | Rochak
September 21, 2021 NepstokLeaveaComment on स्कूलको फिस तिर्न डिर्टजेन्ट पाउडर बेच्ने गर्थे गुलशन ग्रोबर, फेरी कसरी बने बलिउडका ‘ब्याड म्यान’ ?
। बलिउड अभिनेता गुलशन ग्रोवर विरलै फिल्ममा सकारात्मक भूमिकामा देखिएका छन्। धेरैजसो फिल्ममा उनले खलनायकको भूमिका निभाएका थिए। उनले ४०० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरे। गुलशन ग्रोवरले बलिउडमा मात्र नभई हलिउड, जर्मन, अष्ट्रेलियन, ईरानी, ​​यूके जस्ता धेरै भाषाहरुमा काम गरे। २१ सेप्टेम्बर १ छ ५५ मा जन्मिएका गुलशन ग्रोवरले यस वर्ष आफ्नो तज औं जन्मदिन मनाइरहेका छन्। त्यसोभए हामी तपाइँलाई उनको जीवन संग सम्बन्धित केहि विशेष चीजहरु बताउँछौं।
गुलशन ग्रोवरको बाल्यकाल चरम गरिबीमा बित्यो। एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा यसबारे कुरा गर्दै उनले भने, ‘मैले मेरो जीवनमा धेरै उतार चढाव देखेको छु। मेरो बाल्यकाल धेरै नराम्रो परिस्थितिहरु बाट बित्यो। मलाई अझै याद छ कि मेरो स्कूल दिउँसो थियो तर म मेरो वर्दी लगाउँथे र बिहानै बाट बिदा हुन्थे। हरेक बिहान म मेरो घर बाट टाढा ठूलो कोठरी मा भाँडा र लुगा धुने को लागी डिटर्जेंट पाउडर बेच्थे।’
उनले अगाडि भने, ‘म यो सब बेचेर पैसा कमाउँथें। ती कोषहरुमा बस्ने मानिसहरु म बाट चीजहरु किन्थे किनकि उनीहरु मलाई अध्ययन गर्न र केहि ठूलो गर्न चाहन्थे। म गरिबी बाट कहिल्यै डराएको थिइन किनकि मेरो बुबाले सधैं मलाई ईमानदार हुन सिकाउनुभयो। ती दिनहरुमा हामीसंग खाने पैसा थिएन र हामी धेरै दिन भोकै बस्नु पर्ने थियो। मुम्बई आए पछि पनि स्थिति लामो समय सम्म यस्तै थियो तर मैले हिम्मत हारेन।’
बलिउडमा प्रवेश गर्नु अघि उनी थिएटरमा सामेल भए र अभिनय सिके। लामो समय थियेटर मा काम गरे पछि, उनले मुम्बई आउने निर्णय गरे। गुलशन ग्रोवर पहिलो पटक फिल्म ‘हम पाँच’ मा देखिएका थिए। उनले यस फिल्ममा सानो भूमिका निभाए। यस बाहेक, उनी बुलंदी, रकी, सदमा, इंदर बार र ‘वीराना’ मा देखा परे तर उनले फिल्म ‘राम लखन’ बाट वास्तविक पहिचान पाए।
फिल्म ‘राम लखन’ मा गुलशन ग्रोवरको चरित्रको नाम ब्याड म्यान थियो। यस फिल्ममा उनको चरित्र यति प्रसिद्ध भयो कि उनी उद्योग मा एउटै नाम बाट भनिन्छ। एक अन्तर्वार्तामा उनले भने कि जब म फिल्ममा प्रवेश गरेँ, मैले महसुस गरे कि म एक स्टार बन्न चाहन्छु। मैले फेरी खलनायक बन्ने सोचे। उनले भने कि फिल्ममा खलनायकको लामो आयु हुन्छ। उहाँको दीर्घायु, व्यक्तिगत घमण्ड उनको लुक्स मा आधारित छैन तर प्रदर्शन मा आधारित छ। मैले यस्तै केहि गर्नु थियो, त्यसैले मैले यो बाटो रोजे ‘।
विदेशबाट फर्केपछि श्रीमानले श्रीमतीसंग जब हिसाब मागे……
October 6, 2021 Nepstok
कुलमान घिसिङले कति खान्छन् तलव ? के-के छ सेवा सुविधा ?
August 16, 2021 Nepstok